Politika Mangataka ny GVRD II ny MFM - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Nifanentana mba hamondrona indray ireo rehetra efa nandalo tao amin’ny antoko Mfm, miantso ny herivelona rehetra isam-paritra mba hirotsaka sy handray anjara ao amin’ny mandatehezana ihany koa.
Mahatsapa ny Mfm fa misy ny fahadisoan’ny tantara nisy teto amin’ny Firenena. Nandray fanapahan-kevitra noho izany ny antoko ka hanapariaka antontan-kevitra mba hanaovana adihevitra sy fandalinana isam-paritra. Tsy maintsy haverina ny sekolin’antoko mba ho fampianarana sy fanabeazana ara-politika ireo mpikambana sy ny vahoaka Malagasy.
Nisy ireo sakana tsy nampandroso
Tsy afaka niroso ny Firenena hatramin’izay satria nisy hatrany ny sakana ara-toe-tsaina, ara-drafitra, ara-pomba fiasa. Isany antony tsy nahafahan’ny Firenena nandroso ireo. Nahantra hatrany ny Malagasy, ambany dia ambany ny fari-piainana. Niverimberina ihany koa ny fihetsehana isa-tsehatra. Amin’izao fotoana izao dia mihetsika ireo mpianatry ny oniversite, Toamasina, Toliara, eo an-kilany ny hetsika ataon’ny mpanohitra. Miteraka olana hatrany ny fifidianana eto amintsika. Mitarika amin’ny fifandirana politika izany.
Azo tanterahana tsara ny adihevitra an-databatra boribory ho fitadiavana vahaolana, ary an-kitsi-po no hanatanterahana izany. Efa nisy taloha ny mpitondra tsy nety nihaino ka niafara tamin’ny korontana. Sahirana ny Firenena ary mahantra ny vahoaka tsy mety tafarina mihitsy hatramin’izao fotoana izao. Mitraka kely dia milentika indray, izay foana no zava-nisy hatramin’izay. Mila mahay maka lesona tamin’ny zava-nisy teo aloha isika raha te ho tafavoaka amin’ity fahantrana lava tsy misy fiafarana ity, vao maika ary mihamafy izany fahantrana izany araka ny hirosoan’ny taona. Vonona hifampiresaka ny Mfm araka ny nambaran’ireo nandray fitenenana ka ny fananganana goverinemanta manana fahefana feno fa tsy fiaraha-mitantana, hanatanteraka andraikitra mazava dia ny fanovana sy fiovana no takian’ny Firenena.
Miantso ny Filoham-pirenena izy ireo mba hiroso amin’ny fanatanterahana ireo, izy ireo, tsy mitomponteny fantatra anefa ny Mfm araka ny nambaran’izy ireo fa ny tantara dia manamarina fa ny fahatarana eo amin’ny fandraisana fanapahan-kevitra amin’ireo tolo-kevitra ireo na ny tsy fanatanterahana azy dia hitondra korontana eto amin’ny Firenena.
Nisafidy ny demokrasia sy ny fanjakana repoblika isika, noho izany « tsy mety ny fampihorohoroana sy fampiasan-kery ary fanagadrana ny olona maneho ny hevitra ataon’ny mpitondra izay manao fitaovana ny mpitandron’ny filaminana sy ny fitsarana ».